Xog Wadaag. (Muhim ah) Q-2aad. (Wax ka ogow Tariikh Muhiim ah).
Thursday February 20, 2020 - 23:11:25 in Wararka by Mogadishu Times
Abaalka Somaliduna siduu Noqon doonaa? Abaartii ku dhacday Ireland Qarnigii 19 aad. saameeynta Abaartu waxa ey ugu xumeeyd Sannadkii 1847, waqtigaa Ireland waxa ey ku hoos jirtay xukunka Ingriiska, Irelandna waa Dal Reer Yurub ah. Dalaga Bataatuh
Abaalka Somaliduna siduu Noqon doonaa? Abaartii ku dhacday Ireland Qarnigii 19 aad. saameeynta Abaartu waxa ey ugu xumeeyd Sannadkii 1847, waqtigaa Ireland waxa ey ku hoos jirtay xukunka Ingriiska, Irelandna waa Dal Reer Yurub ah. Dalaga Bataatuhu waa cuntada ugu badan ee dhaqan ahaan ey u leeyihiin Dadka Ireland, noloshunu ey ku tiirsaneyd. Qarnigii 19aad Ireland waxaa ku dhacday Abaartii weyneed ee loo yaqiin Abaartii 7da Sanno ama Abaartii Bataataha, Bataatihii yaraa ee u soo baxayna waxaa ku dhacay Cudurka Fungus . Abaartaa waxaa ku geeriyooday in ka badan Hal Million oo Qof oo Reer Ireland ah. In ka badan Hal Million oo Reer Ireland ahna waxa ey u qaxeen Dalka Mareykanka. Dadkii aan awoodin Qaxuna waxa ey u dhinteen Gaajo, Macluul iyo Cuduro. Sida uu sheegay English philanthropist James Hack Tuke, Dadku waxa ey cunayeen wax kasta oo ey ku jiraan qashinka Xeebaha iyo cunno xataa Xayawaanku uuna cuni Karin. Taalooyin lagu Xasuusto ayaa loo dhisay Abaartaa ( F.S: 1aad)
Kumanyaal meyl, meel ka fog waxaa ku noolaa Suldan Islaam ah, waa Sultankii Cusmaaniyiinta, Suldan Cabdulmajiidkii 1aad. Suldaanku, Ninkii u ahaa Dhakhtarka Ilkaha oo u dhashay Dalka Ireland ayuu ka maqlay in Dhibaato Beni aadannimo oo weyn iyo Xaalad quus ahi ey ka jirto Ireland . (F.S: 2aad)
Halka isla waqtigaa Boqoradii Ingriiska "Queen Victoria” ey u dirtay 2,000 British pounds oo kaliya, La taliyayaashii Boqorada ayaa diiday in loo diro Ireland wax ka badan intii Boqoradu ey Direysay, taa oo ceeb ku ah Boqoradda.
Laakin Ciidanka Badda ee Ingriisku ma ogolaan in Maraakiib Ajnabi ah ey ku soo xirataan Dekadaha Magaalooyinka "Dublin iyo Cork”. Sidaa darteed ayaa Maraakiibtii Turkiga ee macaawinadu u sii gudbeen dhinaca waqooyi ilaa ey ka dajiyeen Dekeda "Drogheda” iyo Xeebaha Wabiga "Boye” iyaga oo hore u soo maray Badda Mediterranean-ka, kadibna Galbeedka Bortuqaal iyo Spain ilaa Cirifka Galbeed ee Yurub.
Weli meela badan oo ka mid ah Magaalooyinka Ireland waxaa ku dhagan Calaamda Bisha iyo Xiddigta Turkiga, kuwaa oo xataa Calaamad u ah Kooxda Kubbada Cagta ee "Drogheda United team”. Waxa kale oo jira warqad ey saxiixeen dadka Magaalada oo dhan oo loo diray Dadka Turkiga, oo ey ku qoran tahay waxaan u mahad celineynaa Dadkii Muslimka ahaa ee si bani aadannimo ah noo badbaadiyay Anaga oo Kirishtaan ah oo musiibo dabeeciya na heysay, kana fog Deegaanka Muslimiinta, waxaan ogaanay Dhab ahaan Islaamku waxa uu yahay iyo Naxariista uu farayo Muslimiinta. Qofkasta oo Turki ah oo halkaa tago aad ayaa loogu soo dhaweeyaa.